#OneCameroon2019: Cameroon, nzvimbo yakasarudzwa yevadzidzi veCongo - TELES RELAY
HOME » mwe #OneCameroon2019: Cameroon, nzvimbo yakasarudzwa yevadzidzi veCongo
#OneCameroon2019: Cameroon, nzvimbo yakasarudzwa yevadzidzi veCongo
Mumasangano ehurumende kana ega, inowanzosangana neCongo pakati pevakanyoreswa.
Yaounde, mune imwe nzvimbo yega yega iri muruwa rweTropicana, dzidzo yezvidzidzo zvehupenyu dzakapiwa kirasi yevadzidzi vanenge makumi matatu. Pakati pevadzidzi, Joel Bilele. Makore 21 nemaroto akazara maziso, jaya iri iri kuCameroon kubvira muC2 makore. Iye anobva kuCongo Brazzaville.
Hupenyu hwakanaka hweKamerbia
Hazvitore maminitsi gumi panguva yekuzorora kuona kuti Joel anonzwa pamba muCameroon. Paakabvunzwa pamusoro pezvikonzero zvemufaro uyu, akavapindura asinganetseki, "Cameroon yakanyanya kunaka". Kufanana naye, vazhinji veCongo vanosarudza Cameroon kuve dzidzo yepamusoro pashure pokunge vawana baccalaureate yavo. Zvikonzero zvezvisarudzo zvavo zvakawanda:
- mari yekurarama yakanyanya kuderera kudarika munyika yavakabva,
- hutano hwekudzidziswa,
- kushamwaridzana uye kugamuchirwa kwemaCameroon
- kusiyana kwekudzidziswa
- kusununguka kwekushamwaridzana kwevanhu.
Vamwe vanobvuma kunzwa nezveCameroon zvakare. Vaya vakatarisana navo vanoramba vachiimba rumbidzo ye nyika yaMid Dibango. Nzvimbo dzezororo, zvinonhuwira zvinobatsira upenyu hwavo munyika ino mumoyo weCentral Africa.
Zvakakosha kusimbisa izvi. Vose veCongo vakasangana muCameroon vanoziva vaKameroni vane hukama hwakanaka hwevanhu. Kumubvunzo, iwe unofungei nezveKameroni, vanhu vose vanopindura "ivo vari nyore kurarama, ivo vanhu vakanaka. Vari kugamuchira uye vanokubatai sehama ". Nzira yekuve iyo inofambisa kushamwaridzana kweumwe neumwe uye inovatsigira kugara kunonakidza. Vamwe vokuCongo kunyange vanosvika pamagumo ekugara vakabatana neKamerbia. Vamwe vanoita shamwari dzakanaka nevaya vasingambotauri. Ushamwari hukuru hunoberekwa.
Nyaya iyi yakatanga kutanga http://www.crtv.cm/2019/05/onecameroon2019-le-cameroun-destination-de-choix-pour-les-etudiants-congolais/
"Kuziva inzira" uye tsvimbo inogadziriswa mubazi rino re physics - New York Times
Zviratidzo zvenyika: 20 inogona, kupemberera kubatana kweCameroon